ကျွန်တော့်ရဲ့ Android ကို PC ကမသိပါဘူး။ ဘာလုပ်ရမလဲ။ | Androidsis
ပေမဲ့ Android သည်လူသုံးအများဆုံး mobile operating system ဖြစ်သည် ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ (၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်ဆယ်ခုတွင်ရှစ်ခုကျော်၌ရှိသည်) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အစ မှနေ၍ သင်အများစုခံစားနေပြီးဖြစ်သောလက်ရှိဗားရှင်းသို့အလွန်ထူးခြားသောပြောင်းလဲမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သော်လည်းအမှန်တရားမှာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘ ၀ မှာဘာမှလုံးဝမပြည့်စုံလို့ပါ။ အထူးသဖြင့် Android စက်ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတုန်းပါပဲ။
အချိန်တွေရှိတယ် ကွန်ပျူတာမိုဘိုင်း detect မထားဘူး ငါတို့ချိတ်ဆက်ပြီ ၎င်းအတွက်အကြောင်းပြချက်များနှင့်အကြောင်းရင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုရှုပ်ထွေးပုံရသော၊ အမှန်တကယ်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုအထိ၊ drives များမှကျရှုံးခြင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲအမှားအယွင်းတစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်တို့ activated မလုပ်နိုင်သော option တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် \_ t မည်သည့်အလုပ်များနှင့်အညီဖုန်းကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်နေသနည်း။ ကြိုးစားမှု၌သင်စိတ်မပျက်စေရန်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ကြိုးစားမည် ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည်မိုဘိုင်းလ်ကိုမသိရှိရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းများနှင့်၎င်းတို့၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်သည်။ မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား
4 ကြည့်ရတာမိုက်မဲပေမဲ့ ...
များသောအားဖြင့်အများသောအကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုကိုစတင်ကြပါစို့ ဟာ့ဒ်ဝဲပြproblemsနာများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန် "အန" တရာယ်ရောက်နေသော "သို့မဟုတ်နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးဖြစ်သော၊ အနည်းဆုံးနည်းပညာပိုင်းအရသက်တမ်းရှိသောကိရိယာများကိုတွေ့ရှိသောအခါ၎င်းသည်အတော်အတန်ဘုံပြproblemနာဖြစ်သည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲပြproblemsနာများအကြောင်းပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ကိုင်ဖုန်းကိုယ်တိုင်သာမကကော်နက်ရှင်နှင့်ဆက်သွယ်မှုကေဘယ်ကိုပါရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီဖြေရှင်းချက်ကရိုးရိုးလေးပဲ။ အဲဒီ hardware ကိုစစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်။ Android ဖုန်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်သည်ကိုစစ်ဆေးပါterminal connector မပျက်စီးဘူးဆိုတာစစ်ဆေးပါ။ ကေဘယ်ကြိုးကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာစစ်ဆေးပါ နှင့်ပါဝါဖုန်းကိုရောက်ရှိ ... တစ်ခါတစ်ရံဖြေရှင်းချက်အခြား cable ကိုကြိုးစားနေသကဲ့သို့ရိုးရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ဟာ့ဒ်ဝဲပြproblemsနာတွေဟာအဓိကအကြောင်းအရင်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်သံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး ကွန်ပျူတာသည်မိုဘိုင်းကိုမတွေ့ပါကယာဉ်မောင်းပြproblemsနာများကိတ်မုန့်ကိုယူသည်။ ကားမောင်းသူ!
မောင်းနှင်သူများမှာ Controller များဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်သင်၏ Android ဖုန်းကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ၎င်းသည်သူကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီး၎င်းသည်ပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာကွန်ပျူတာမှဂီတကိုလွှဲပြောင်းခြင်း ဖုန်းသို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ယာဉ်မောင်း Android ဗားရှင်းအသစ်များကိုလည်း ROM ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်သင်စမ်းသပ်နိူင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အိမ်သုံးအသုံးပြုသူများနှင့် developer များကိုပါအကျုံးဝင်စေသည့်အလွန်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည်မိုဘိုင်းကိုအသိအမှတ်မပြုပါက၎င်းသည်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သည် လိုအပ်သောယာဉ်မောင်းမရှိကြပါနှင့် ၎င်းအတွက်၊ သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသော်လည်း၊ အချို့သော“ ပြည့်စုံမှုနည်းသော” ဖုန်းများအတွက်မူအပိုဆော့ဖ်ဝဲမလိုအပ်ပါ။ Samsung ကဲ့သို့သောအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ဆင်တူသောအခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါအခြေအနေများပြောင်းလဲသွားသည်။
ဤဖြစ်ရပ်များတွင်အမှန်တရားမှာပြyouနာများလည်းမဖြစ်သင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ၎င်းသည်လိုအပ်သည့် software ကိုတပ်ဆင်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည် ၎င်းကိုသင်၏ PC နှင့်ချိတ်ဆက်မိသော်လည်းအစပိုင်း၌လေ့လာခဲ့သည့်အတိုင်းဘာမှမစုံလင်ပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကျရှုံးနိုင်သည်။ ကွန်ပျူတာသည်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိပါကသင်၏ဖုန်းမော်ဒယ်အတိအကျအတွက်ယာဉ်မောင်းများကိုဂူဂဲလ်တွင်သာရှာဖွေပါ၊ ၎င်းကိုသင်လျင်မြန်စွာရှာဖွေပြီးထည့်သွင်းနိုင်သည် ဥပမာ, Samsung drivers ငါတို့ဒီမှာရှိတယ်။
Custom ROM တစ်ခုကို install လုပ်ပြီးစမ်းသပ်ချင်တယ်ဆိုရင် (သို့) device ကို root လုပ်ချင်ရင် developer programming software ကို install လုပ်ပါ အန်းဒရွိုက်စတူဒီယို ဒါမှမဟုတ်အစီအစဉ် ၁၅ စက္ကန့် ADB Installer သင်လိုအပ်သောယာဉ်မောင်းများအားလုံးကို download လုပ်နိုင်သည်။
My Computer သို့သွားပြီး right click လုပ်ပြီး Properties ကိုရွေးပါ။
ပေါ်လာမည့် menu ထဲက hardware ကိုနှိပ်ပါ
Device Manager ကိုနှိပ်ပါ။
စာရင်းတစ်ခုပေါ်လာပါက Universal Serial BUS (BUS) Controller ကိုရွေးချယ်ပါ
အခုဆိုရင် "Advanced host controller" ကို right click နှိပ်ပြီး enable လုပ်ပါ
အများအားဖြင့်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းများအမြဲရှိသည်ဟုမကြာခဏဆိုလေ့ရှိပြီး၊ ကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်သောအခါသင်၏ Android သည်မှန်ကန်သောစနစ်တွင်ရှိရမည် ၎င်းကို detect လုပ်ရန်နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်၊ မလိုအပ်သောတန်ဖိုးကိုမှန်ကန်စွာပြုလုပ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
သင်၏ Android စမတ်ဖုန်းကို PC နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါဖြစ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းသုံးခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင့်လျော်သောတစ်ခုကိုရွေးရမည်။
ဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းပါ။ ၎င်းသည်ညွှန်ပြသည့်အတိုင်း၎င်းသည်သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာမှဖိုင်များကို ၀ င်ရောက်ရန်ကွန်ပျူတာကိုခွင့်ပြုထားသောကြောင့်၎င်းသည်သင်၏ Android မှဖိုင်များကို PC သို့လွှဲပြောင်းနိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဓါတ်ပုံများကိုလွှဲပြောင်းခြင်း (PTP), သည်သင်၏ဓါတ်ပုံများနှင့်သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုသာစီမံခွင့်ပြုသည့် mode ဖြစ်သည်။
နှင့်သင်တန်း၏မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့် “ ဖွံ့ဖြိုးမှုရွေးချယ်မှုများ” အပိုင်းရှိ“ USB debugging” option ကိုစစ်ဆေးပါ။ ကောင်းပြီ၊ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ကွန်ပျူတာသည်မိုဘိုင်းကိုမရှာဖွေနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဤရွေးချယ်မှုကိုသင်ရှာမရပါကအောက်ပါတို့ကိုလုပ်ပါ။ - "Settings" → "About device" ကိုသွားပြီး "Build number" ကိုအကြိမ်များစွာနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည် "Development Options" ကို enable လုပ်လိမ့်မည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, ငါတို့ဖော်ပြထားသောများထက်အခြားမည်သည့်စစ်ဆေးမှုများမလုပ်ဆောင်မီ, သင်သင့်ပါတယ် လက်ကိုင်ဖုန်းကို restart လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုအဖြစ်ပုံရသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ အထူးကုပညာရှင်တစ် ဦး ပြောတာကိုကြားရရင်တောင်မှကျနော်တို့ကစဉ်းစားနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒါတွေအတွက်မင်းလေ့လာခဲ့တာလား? ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်က Terminal ကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းသည်ဖြေရှင်းနည်းမည်မျှဖြစ်သည်ကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည် ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည်မိုဘိုင်းကိုအသိအမှတ်မပြုသည့်အခါနှင့်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်အခြားအမှားများစွာတွင်ပင်ဖြစ်သည်။ ကိုသတိရပါ: "အချိန်ပြန်လည်စတင်ပါကသင်၏မိုဘိုင်းလ်မှဒဏ်enseာရီကိုထုတ်ပစ်လိမ့်မည်" ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ပါဝါ / အိပ်စက်ခြင်းခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဖိကိုင်ထားရုံသာရွေးပြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်အထိဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုရွေးပြီးစောင့်ပါ။
တခါတရံအကြီးအကျယ်အတိုင်းအတာများလိုအပ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါအချက်များမရှိပါကသင်၏ Android မိုဘိုင်းသည်ကွန်ပျူတာနှင့်မချိတ်ဆက်ပါကသင်အလုပ်လုပ်သင့်သည် သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုပြန်ယူပါဆိုလိုသည်မှာ၊ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအရာအားလုံး (ရုပ်ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ အပလီကေးရှင်းများ၊ အဆက်အသွယ်များစသဖြင့်) ကိုလုံး ၀ ပယ်ဖျက်ပြီး၎င်းကို၎င်းကို၎င်း၏ပထမဆုံးသေတ္တာထဲမှထုတ်ယူသည့်နေ့ကဲ့သို့သုညသို့ထားခဲ့ပါ။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤ“ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော” အတိုင်းအတာသည်တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်၊ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးထွက်သယ်ဆောင်အားဖြင့်, ငါ့မိုဘိုင်း PC ကိုချိတ်ဆက်မထားဘူးသောပျက်ကွက်မှုပြင်ပေးလိမ့်မည်သာမက, ဒါပေမယ့်သင်ကပိုပြီးချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်တယ်, သင်ပိုမိုသိုလှောင်မှုအာကာသရှိသည်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
သင်၏ကွန်ပြူတာသည်သင်၏ Android စမတ်ဖုန်းကိုအသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါကဤ post တွင်အဆိုပြုထားသောဖြေရှင်းနည်းများသည် rebooting မှပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းအထိအသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ မရရှိပါကသင်၏ terminal ကိုသက်တမ်းတိုးရန်အချိန်တန်လားစဉ်းစားသင့်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » ကျွန်တော့်ရဲ့ Android ကို PC ကမသိပါဘူး။ ဘာလုပ်ရမလဲ။